Ezona zixhobo zibalaseleyo zokuguqula iTV ibe yi-Smart TV | Iindaba zeGajethi
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokuguqula iTV yakho ibe yi-Smart TV
UIgnacio Sala | | elektroniki, ZeThelevishini
Itekhnoloji iqhubele phambili kakhulu kule minyaka idlulileyo, kwaye ukuba ayichazwanga kuthi sonke abo bazalwa phakathi kweminyaka yama-70 ukuya kuma-80. Okwangoku uninzi, ukuba ayizizo zonke iithelevishini abazithengisayo zikrelekrele, kwaye ziphantsi kwegama elithi Smart TV. Ukulandela amanyathelo nje ambalwa alula Guqula iTV yethu ibe yi-Smart TV.
Olu hlobo lukamabonwakude lusinika ulwazi olukhawulezileyo malunga neenkqubo ezisasazwa kumabonakude, ezisithintelayo ekubeni sibhenele kumnxeba odumileyo nowakudala okanye sisebenzise isicelo sefowuni okanye ithebhulethi. Ikwasinika ukufikelela kumxholo ongapheliyo ngaphandle kokuhamba usofa, njengeNetflix, HBO kunye nezinye ividiyo kwiinkonzo zebango.
Kodwa kwakhona, kuxhomekeke kwimodeli ye-Smart TV, sinokubonisa umxholo we-smartphone okanye ithebhulethi yethu ngokuthe ngqo kumabonwakude, ilungele xa sifuna ukudlala iividiyo esizigcine kwisixhobo sethu, bonisa iifoto zohambo lokugqibela, kwi-Intanethi kwaye udlale umxholo ...
Kodwa ayinguye wonke umntu ozimisele ukuvuselela umabonwakude omtsha, kuba le banayo ngoku isebenza ngokugqibeleleyo kwaye okwangoku ayibonisi zimpawu zokudinwa. Kule nqaku siza kukubonisa iinketho ezahlukeneyo ukuguqula iTV yethu yakudala ibe yiTV efanelekileyo esivumela ukuba sonwabele izibonelelo ezinikezelwa lolu hlobo lukamabonwakude.
1 Imfuneko ebalulekileyo: Uxhumano lwe-HDMI
2 Izinto eziluncedo kwi-Smart TV
3 Zeziphi iindlela onokukhetha kuzo kwintengiso?
3.2 I-Chromecast 2 kunye neChromecast Ultra
3.3 Ibhokisi yeTV yeXiaomi Mi
3.4 Ezinye iibhokisi ezisetiweyo
3.5 Intonga ye-HDMI
3.5.2 UAsus Chromebit
3.6 Qhagamshela ikhonsoli
3.6.1 Dlala i4
3.7 Umdlali weBlu-ray
3.8 Qhagamshela ikhompyutha
3.8.1 I-PC okanye iMac
3.9 MHL mobile ehambelanayo
Imfuneko ebalulekileyo: Uxhumano lwe-HDMI
Iintambo ze-HDMI ziyasivumela hambisa zombini umfanekiso kunye nesandi ndawonye kwikhebula elinyeYiyo loo nto iyeyona nto isetyenziswa kakhulu koomabonakude bale mihla, ishiya iintambo ze-RCA kunye ne-scart / scart, ezingakhange zithathe indawo eninzi, kodwa zikwanciphise nomgangatho womfanekiso kunye nesandi.
Ukutshintsha i-TV yakho yakudala uyenze smart, kufuneka iadaptha eguqula isiginali ngeRCA okanye iscart kwiHDMI. KwiAmazon sinokufumana inani elikhulu lezixhobo zolu hlobo. Nantsi ikhonkco kwabo basinika owona mgangatho uphakamileyo / wexabiso.
Izinto eziluncedo kwi-Smart TV
Kodwa olu hlobo lukamabonakude alusivumeli nje ukufikelela kwinani elikhulu lomxholo ngohlobo lweemovie kunye nomdlalo bhanyabhanya, kodwa kananjalo usinika ukufikelela kwiYouTube apho sinokufumana khona inani elikhulu leevidiyo kuwo nawuphi na umxholo. Ikwabonelela ngeenkonzo zolwazi lwemozulu, ukufikelela kwiimephu zikaGoogle, iitshaneli zekhathuni zabancinci, amajelo okupheka, iindaba eziqhubekayo ...
Ukongeza, kuxhomekeke kuhlobo lukamabonakude, singayisebenzisa ukwenza iifowuni zevidiyo ngeSkype, ngokucacileyo kwifayile ye- iimodeli ezidibanisa ikhamera, Ilungele ukwenza iqela levidiyo ekufowuneni kwamanye amalungu osapho. Singayisebenzisa ukumamela ikhathalogu ebanzi yeSpotify, ukhetho olukhulu ukuba umabonwakude wethu uqhagamshele kwistereo.
Zeziphi iindlela onokukhetha kuzo kwintengiso?
Kwimarike sinokufumana inani elikhulu lokukhetha elikuvumela ukuba uguqule umabonwakude wakudala ube ngumabonwakude ohlakaniphile. Kule ecosystem, tSinokufumana umzabalazo oqhelekileyo kuGoogle nakwiAppleKuba ukuxhomekeka kwindalo oqheleyo kuyo, kunokwenzeka ukuba usebenzise enye okanye enye.
Ukuba usebenzisa iMac, i-iPhone, i-iPad okanye nasiphi na esinye isixhobo se-Apple, olona khetho unokulufumana kwintengiso yi-Apple TV, kuba isivumela ukuba singathumeli umxholo weMic yethu okanye isixhobo se-iOS kwiTV. , kodwa nangaphezulu, ukudityaniswa kwendalo kugqityiwe. Kananjalo ngokusungulwa kwesizukulwane sesine i-Apple TV, iApple yongeze eyayo ivenkile, ukuze sikwazi ukuyenza Ukusetyenziswa kweApple TV ngokungathi liziko lemidlalo.
Enkosi ngenani elikhulu lezicelo ezikhoyo kwivenkile yeApple TV, singasebenzisa usetyenziso olunjengePlex, VLC okanye ukuNika dlala iimuvi okanye uthotho lweefilimu esizigcine kwikhompyuter yethuNokuba yiMac okanye iPC. Ikwasivumela ukuba sikwazi ukufikelela kuwo wonke umxholo okhoyo kwi-iTunes, ukuze sikwazi ukuqesha okanye ukuthenga imovie esibonelelwa yiApple ngale nkonzo.
INetflix, i-HBO, iYouTube kunye nezinye ziyafumaneka kwiApple TV kunye nezinye iindlela zolu hlobo ukuze zikwazi sebenzisa naluphi na uhlobo lomxholo ngaphandle kokushiya ikhaya lethu, nini kwaye phi na. Zonke ezinye iindlela esikubonisa zona kweli nqaku azihambelani kakuhle ne-ecosystem ye-Apple, nangona ngokufaka isicelo esinqabileyo sinokwenza ukudityaniswa kube lula okanye kunganyamezeleki.
Thenga iApple TV
I-Chromecast 2 kunye neChromecast Ultra
UGoogle ujoyine umkhwa wolu hlobo lwesixhobo kutsha nje, ukuba sithelekisa ne-Apple TV, isixhobo esangena kwimarike kwisizukulwana sokuqala ngo-2007. IChromecast sisixhobo esenziwe nguGoogle esivumela ukuba udlale umxholo ngokusasaza kwi-smartphone yakho kumabonwakude. Iyahambelana zombini i-iOS, i-Android, iWindows kunye ne-macOS ecosystem isebenzisa isikhangeli seChannel. Umxholo onokuthunyelwa kwiChromecast Inomda kwizicelo ezixhaswayo kunye nesikhangeli seChannel.
IChromecast Inexabiso le-39 euro, ifuna unikezelo lwamandla e-microUSB kwaye kulula kakhulu ukumisela. Ukuba sikhetha imodeli ye-4k, i-Ultra, ixabiso layo liyadubula liye kuma kwi-euro ezingama-79.
Thenga iChromecast 2 / Thenga iChromecast Ultra
Ifemu yaseTshayina ikwafuna ukungena ngokupheleleyo kwimixholo yemultimedia esinokuthi siyisebenzise kumabonwakude wethu kwaye isinike iXiaomi Mi TV Box, isixhobo ilawulwe nge-Android TV 6,0, inkqubo efanayo naleyo uninzi lweeTV ezikhoyo ezisinika zona. Ngaphakathi sifumana i-2 GB ye-RAM, i-8 GB yememori yangaphakathi, izibuko le-USB ukuqhagamshela i-hard drive okanye i-USB stick. Esi sixhobo sikwazi ukudlala umxholo kwi-4k kwi-60 fps ngaphandle kwengxaki.
Ezinye iibhokisi ezisetiweyo
Kwimarike singafumana inani elikhulu lezixhobo ezisivumela ukuba singene kwi-Intanethi, izixhobo ezilawulwa luhlobo lwe-Android ezilungiselelwe imeko yomabonakude, njengoko i-Nexus Player isinike yona, ukugcina imigama. Izixhobo zolu hlobo ziyafumaneka kuwo onke amaxabiso kunye nokubalulwa, kodwa kufuneka uhlale ukhumbula ukuba ukomelela kokudlala, okugudileyo nokukhawulezayo, ngakumbi xa sifuna ukudlala iifayile kwifomathi ye-mkv umzekelo.
Ngokuphathelele kwizicelo esinokuzifaka, sithathela ingqalelo ukuba yi-Android, unokufikelela ngokuthe ngqo kwiVidiyo kaGoogleKe ngoko, sinokufaka iNetflix, iYouTube, iPlex, iVLC, iiSpotify kunye nezicelo ezahlukeneyo esizinikwa ngabasebenzisi ukuba basebenzise umxholo okwi-smartphone okanye ithebhulethi.
Nangona kuyinyani ukuba iGoogle Chromecast iseyintonga, ndithathe isigqibo sokuzahlula kolu luhlu njengoko sesinye sezixhobo ezibonelela ngexabiso eliphezulu kwezentengiso, ukongeza ekubeni ibikho kwenye yezona zidumileyo. Kodwa ayisiyiyo kuphela ekhoyo. Kwintengiso sinakho fumana inani elikhulu lezixhobo zolu hlobo lweempawu ezahlukeneyo kakhulu kodwa ndiza kugxila ekuboniseni ukhetho olunikezela ngexabiso elifanelekileyo lemali.
Enkosi kule khompyuter idityaniswe kwizibuko le-HDMI, singasebenzisa Windows 10 kwiTV yethu, ngokungathi sidibanise iPC kuyo. Ngaphakathi sifumana iprosesa ye-Intel Atom ene-2 ​​GB ye-RAM kunye ne-32 GB yokugcina. Idibanisa imemori khadi yokufunda, amazibuko ama-2 e-USB kwaye isicelo senziwa ngezibuko le-microUSB. Ngokucacileyo ikwanonxibelelwano lweWi-Fi ukuze lukwazi ukuqhagamshela kwi-Intanethi kunye nokufikelela kumxholo esiwudingayo ngamaxesha onke.
Thenga ngoku I-Intel ® Compute Stick-Ikhompyuter yeDesktop
Ifemi yaseTaiwan ikwabonelela nathi kwintengiso yekhompyuter encinci edibanisa kwizibuko lethu le-HDMI. Iineenguqulelo ezimbini, enye ine Windows 10 enye ene-ChromeOS. Iimpawu zayo ziyafana kakhulu nezo zifunyenwe kwi-Intel Compute Stick, ene Inkqubo ye-Atom, i-2 GB ye-RAM, uqhagamshelo lweWifi, amazibuko amabini e-USB, umfundi wekhadi kunye ne-2 GB yokugcina ngaphakathi.
Thenga ngoku I-ASUS Chromebit-B014C ngeChannelOS
Thenga ngoku I-ASUS TS10-B003D ineWindows 10
Le yenye yezinti ezinexabiso eliphantsi esinokuzifumana kwimarike kwaye isinika ukuhambelana okukhulu nenkqubo yezendalo, kuba iyahambelana neeprotokholi zeMiracast, AirPlay kunye neDLNA kunye neWindows, Linux, iOS kunye ne-Android.
Thenga ngoku Akukho mveliso ifunyenweyo
Kangangexesha, consoles abe isixhobo nje kuphela ukudlala imidlalo, kodwa sinike unxibelelwano kunye ne-Intanethi ukubukela iividiyo zeYouTube, ukonwabela iNetflix, ukujonga umxholo ogcinwe kwiPC yethu okanye kwiMac ngePlex ...
I-Sony PlayStation lelinye lawona maziko amaziko e-multimedia anokufumaneka kwimarike. Ayisiniki kuphela unxibelelwano olufanayo njengeeTV zeTV, kodwa nayo ikwangumdlali weBlu-RayInesicelo seNetflix sokusebenzisa umxholo kwiqonga layo, iSpotify, iPlex, iYouTube, kwaye ke ikhulu lezicelo eziluncedo kakhulu.
Umahluko ophambili esiwufumanayo ngePlayStation kukuba iXbox One ayisiniki mdlali weBlu-Ray, oyibeka phantsi kweemeko eziphantsi kule meko kuphela, kuba ikwasivumela ukuba sonwabele iNetflix, iPlex, iSpotify, iTwitch, iSkype. … Kananjalo enkosi Windows 10 sinako yongeza inani elikhulu leapps okwangoku kuGcino lweWindows.
Abona badlali beBlu-ray banamhlanje, ngokuxhomekeke kumenzi, basinika ngokusebenzayo izisombululo ezifanayo zonxibelelwano esinokuzifumana ngoku kwizikhombisi Ngala maxesha ndivakalisile ngasentla, ngaphandle kwendlela yokonwabela imidlalo. Olu hlobo lomdlali lusinika iintlobo ezahlukeneyo zezicelo esinokuthi sikwazi ukufikelela kuzo kwi-YouTube, Netflix, Spotify ...
Esona sisombululo sitshiphu Into esinokuyifumana kwintengiso yinto enokwenzeka yokudibanisa ikhompyuter okanye ilaptop kumabonwakude wethu. Kuxhomekeka kubudala bayo, kunokwenzeka ukuba asidingi kuthenga iadaptha ye-HDMI kumabonwakude, kuba ngezibuko leVGA kunye nokukhutshelwa kwesandi kwikhompyuter sinokuyidibanisa neentambo zikamabonakude ngaphandle kwe-HDMI.
I-PC okanye iMac
Okwethutyana ngoku, singafumana kwintengiso inani elikhulu leekhompyuter ezisisiseko, iikhompyuter ezincinci ezisivumela ukuba sinxibelelane ngokuthe ngqo kwizibuko le-HDMI likamabonwakude kwaye esinokufikelela kulo kumxholo we-Intanethi. ngokungathi siyenza ngokuthe ngqo kwikhompyuter yethu, ikhibhodi kunye nempuku.
I-Smart TV ayikho enye into ngaphandle komabonwakude onokufikelela kwimixholo ebekwe ngaphandle kwayo, nokuba ikwi-Intanethi okanye kwikhompyuter okanye kwi-USB stick okanye kwimemori khadi. I-Raspberry Pi isinika isisombululo esinoqoqosho kwezi ntlobo zamatyalakuba ngokongeza imodyuli yeWifi sinokufikelela nakowuphi na umxholo okhoyo ngaphakathi kwenethiwekhi nangaphandle kwayo.
MHL mobile ehambelanayo
Ukuba sine-smartphone ehambelana ne-OTG kwidrowa, sinako yisebenzise njengeziko losasazo ukuyiqhagamshela ngokuthe ngqo kwizibuko le-HDMI kumabonwakude wethu kwaye ubonise konke umxholo wesikrini kumabonwakude.
Kweli nqaku sikubonise zonke iindlela ezahlukeneyo esinokuzifumana kwimarike yokuguqula umabonwakude wakudala, nokuba yityhubhu, ibe yiTV ekrelekrele. Ngoku konke kuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali oceba ukulusebenzisa. Eyona ndlela yoqoqosho kukudibanisa ikhompyuter endala kumabonwakude, kodwa imisebenzi ekhoyo iya kuncitshiswa sisixhobo.
Ukuba sifuna ngokwenene ukuhambelana kunye nokungafani, Olona khetho lulungileyo ziibhokisi ezisetiweyo eziphezulu ezilawulwa yi-Android okanye i-HDMI Stick ephethwe Windows 10, kuba ayikuvumeli ukuba uyithuthe ngokukhawuleza naphi na kwaye uyisebenzise ngokungathi yikhompyuter, ubuncinci kwi imeko yentonga Windows 10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Ezona zixhobo zibalaseleyo zokuguqula iTV yakho ibe yi-Smart TV
Iijikelezi ezimnandi nazo ziyatsha